सुर्खेत जिल्ला चौपान्य गाउ`पालिका वडा नं ४ का गगन बहादुर राव जो कामको शिलशिलामा कोरियासम्म पुगेका थिए र दैवको यो कस्तो खेल कमाउन गएको छोरो बाक समा फर्कियो । यो घटना यसरी पनि अति दर्द-नाक भयो कि गगन बितिसकेपछि उनको श-व नेपाल ल्याउन करिब-करिब १२ देखि १४ लाख खर्च गरेपछि मात्रै नेपाल आइपुगेको हो। त्यहि ठूलो रकम.....
‘लि-भिङ-टु-गेदर’को संस्कार सुरू गरेको अष्ट्रेलियामा अहिले नेपालीहरू पनि सहजताका लागि सँगै बस्छन् । यो संस्कार सहज र खर्च कम गर्नका लागि विद्यार्थीहरूले अपनाएको बाटो थियो । ‘लि-भिङ-टुगे-दर’सँगै स-म्बन्ध विस्तारको क्रम पनि बढ्दा यसका सकारात्मक फाइदा निक्कै थिए । तर, यसलाई एकथरीले विभिन्न ठाउँमा ‘वि-कृति’का.....
‘विदेशमा नेपाली दाजुभाइले सहयोग गर्लान भन्दा लब गरम पो भन्छन’
विदेशबाट फर्केकी आमाजु दिदीले कुवेतमा काम राम्रो छ भनेपछि पार्वतीले विदेश जाने सोच बनाउनुभयो । पार्वतीका तीन जना जेठानी देउरानी त अहिले पनि विदेशमा छन् । त्यसैले उहाँले रोजगारीका लागि विदेश कसरी जाने भन्ने कुरा कसैलाई सोध्नु पर्दैनथ्यो । पार्वती र उहाँका श्रीमान् मुकुन्द अधिकारीको त्यति धेरै ऋण पनि.....
सुशान्तले कमाएका थिए पाँच वर्षमा ७० करोड
नायक सुशान्त सिंह राजपूतको मृ त्युलाई एम्सको फोरेन्सिक टिमले आफै मरेको बताइसकेको छ भने अर्कोतर्फ उनको बैंक खाताको फारेन्सिक अडिट रिपोर्टमा पनि केही संदिग्ध सुराग भेटिएन । सुशान्तको सबै बैंक खातामा पछिल्लो ५ वर्षको क्रममा ७० करोडको लेनदेन भयो जसमा ५५ लाख रिया चक्रवर्तीसँग सम्बन्धित पाइयो । धेरैजसो पैसा.....
काे हुन् त यी ‘क्युट’ ३ वर्षिया बालिका ?
तीन वर्षकी यी सानी नानी यतिवेला मोडलिङका कारण सामाजिक संजालमा चर्चा कमाएकि छिन् । उनी निकै सुन्दर र क्युट तीन वर्षकी एक बालिका सामाजिक सञ्जालहरुमा चर्चामा छिन् । उनी चर्चामा हुनेको खास कारण उनको ‘क्युटनेश’ नै हो । उनी निकै मायालाग्दी र राम्री पनि देखिन्छिन् । जसले गर्दा पनि उनको प्रशंसा गरिरहेको देखिन्छ.....
भवन भट्टका काका ससुरा जापानको प्रधानमन्त्रीमा प्रवल दावेदार !
आगामी हप्ता जापानले नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा लिबरल डेमोक्रयाटिक पार्टीका योशिहिदे सुगालाई प्राप्त गर्ने प्रवल सम्भावना देखिएको छ । बर्तमान प्रधानमन्त्री सीन्जो आवेका बिश्वासपात्रका रुपमा रहेका सुगाले पछिल्लो सर्बेक्षणमा पार्टीका दुई तिहाइ नेताको समर्थन पाउने देखाएको छ । सबैभन्दा लामो कार्यकाल.....
करण जोहर र काजोलको सम्बन्ध किन बिग्रियो त ?
बलिउडका सफल निर्देशक करण जोहरले आत्मकथा ‘यान अनसुइटेबल ब्वाई’ प्रकाशित गरेका छन् । उक्त पुस्तकमा उनले केही सनसनीखेज खुलासा गरेका छन् । आफू २६ वर्षको हुँदा न्युयोर्कमा पहिलोचोटि से क्स गरेको बताउने करणले त्यो अनुभव सिरिङ्ग पार्ने खालको भएको लेखे । उनले दुईचोटि से क्स गरेको र पहिलोचोटिमा पैसा तिरेको लेखेका.....
नेपालकी भाञ्जी, गोविन्दाकी छोरी टिना [फोटो फिचर]
बलिउडमा अत्याधिक चर्चा कमाएका अभिनेता हुन् गोविन्दा । उनलाइ मन नपराउने सायद कमै हाेलान् । उनकाे चर्चा बलिउड देखि हलिउडसम्म हुने गर्छ । अभिनेता गाेबिन्धलाइ नेपाली ज्वाइँ भनेर चिन्ने गरेका छन्, किनकि उनकी बहिनि नेपाली मुलकी सुनिताकी छोरी टिना आहुजा हुन् । टिना सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहन्छिन्.....
सुनसान रोममा नेपालीका दु:ख
चीनपछिको डरलाग्दो स्थिति इटालीमा देखिएको छ भन्ने समाचारमा पढ्दै छौं, संसारले रुचाएका रोम, भेनिस, मिलानोजस्ता पर्यटकीय सहरहरू सुनसान ओखलढुंगाको रुम्जाटार मूल घर भएका देवराज गुरुङ दक्षिण युरोपेली मुलुक इटाली छिरेको २० वर्ष भयो । काम, रोजीरोटी र संघर्षको अनेक चरणमा अनेक खालका सा'स्ती बेहोरेका उनी पहिलो.....
नेपालीले यूएईमा पाए यति ठुलो उपहार
१ किलो सुन नेपाल लैजान प्राविधिक कठिनाइ रहेकाले बजार मूल्य अनुसार ५७ लाख रुपैयाँ नगद प्रदान युएई । १९ वर्षेदेखि युएईमा कार्यरत श्रीजङ्गा–४, ताप्लेजुङका यमनाथ भट्टराईले १ किलो सुन उपहार पाएका छन् । अल अहलिया एक्सचेञ्ज यूएईको विन्टर प्रमोसन योजनाअन्तर्गत १ किलो सुन उपहार पाएका हुन् । एमवीएम कम्पनीमा.....